बाढीपहिरोले २७ राजमार्ग र २१ पुलमा क्षति, पुनर्निर्माण गर्न तीन अर्ब ९५ करोड आवश्यक – Etajakhabar
सडकमा चार अर्ब क्षति –
साउन अन्तिम साता भएको भीषण वर्षासँगै आएको बाढी तथा पहिरोले देशभरका २७ राजमार्ग र २१ वटा पुलमा गम्भीर क्षति पुगेको छ । क्षति भएको संरचना पुरानै अवस्थामा पुर्‍याउन ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको सडक विभागको भनाइ छ ।
प्रतिकिलोमिटर सडक ३ देखि ५ करोड लागत सडक इन्जिनियरहरूका अनुसार सडक मर्मत गर्नभन्दा नयाँ सडक निर्माण गर्नु सहज हुन्छ । सडक मर्मत गर्न देशभर जम्मा पाँचवटा मात्र निर्माण कम्पनी छन् । त्यसमा पनि पुल निर्माण गर्न कोही पनि चाहँदैन । किनकि यो जोखिमयुक्त हुन्छ । सडक विभागका अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रमुख रमेशकुमार सिंहका अनुसार नेपालमा ठाउँविशेष सडक निर्माण लागत फरकफरक छ । तर, न्यूनतम तीन करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँ लागतमा एक किलोमिटर सडक निर्माण हुन्छ । ‘हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा केही बढी पर्छ भने तराईमा कम पर्छ,’ उनले भने । यो माटे सडक कालोपत्रे गर्दासम्मको प्रतिकिलोमिटर लागत हो ।
एक मिटर पुललाई २५ लाखसम्म पुल निर्माण कुन ठाउँमा निर्माण गर्ने, कुन डिजाइनमा निर्माण गर्नेलगायतका विषयमा यसको निर्माण लागत निर्धारण हुने गरेको छ । तर, सडक विभागका अनुसार १ मिटर पुल निर्माण गर्न औसतमा न्यूनतम १५ लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।
१. रुसले बनाइदिएको पुल क्षतिग्रस्त पूर्वपश्चिम राजमार्गको सप्तरीमा पर्ने यस पुलको दायाँ पहुँच स्ल्याब र पाइप कल्भर्टमा क्षति पुगेको छ । अहिले एकतर्फी गाडी सञ्चालनमा रहेको छ । क्षति भएको स्थानमा ग्याबिन पर्खाल, माटो भर्ने र ग्राभेलको काम सुरु गरिएको छ । यो रसियाले नेपाललाई बनाइदिएको पुल हो । यसको आयु सम्पन्न भइसकेको र नयाँ निर्माणका लागि सडक विभागले तयारी गरिरहेको सडक विभागका अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रमुख रमेशकुमार सिंहले बताए । सामान्यतया एउटा सडक पुलको आयु न्यूनतम ४० वर्षदेखि अधिकतम ५० वर्ष हुन्छ ।
२. धनुषा–महोत्तरी सीमा पुलमा क्षति धनुषा र महोत्तरीको सिमानामा रहेको यस पुलमा क्षति भएपछि एकपटकमा एउटा गाडी मात्र पार गर्न दिइएको छ । पुलको एउटा खम्बा क्षतिग्रस्त भएको छ । यो पुल पनि मर्मत हुन नसक्ने र नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने गरी क्षति भएको पुल हो । रसियाले नै निर्माण गरिदिएको यो पुल पनि आयु सकिएको पुल हो ।
३. पुलको आधारस्तम्भ नै भत्कियो पूर्वपश्चिम राजमार्ग र बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया जोड्ने यो पुलको आधारस्तम्भ (फाउन्डेसन) नै भत्किएको छ । अहिले यो सडक भएर सवारी सञ्चालन भएका छैनन् । यो पुल निर्माणाधीन अवस्थामै रहेको थियो । यो पुल के कारणले भत्कियो भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर मात्र थप बताउन सकिने सडक विभागको भनाइ छ ।
४. माडी चितई खोला पुल डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरअन्तर्गत रहेको यो पुल भाँचिएको छ । चितवनको बरुवा बजारमा ३ स्पानको पुल भाँचिएर सडक अवरुद्ध रहेको छ । यो पुलबारे पनि थप अध्ययन गरेर मात्र बताउन सकिने विभागले जानकारी दिएको छ ।
बाढीले जीवन भयावह छ, यातायात पनि अवरोध छ वीरबहादुर बलायर मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात बाढी र पहिरो प्रभावित तराई क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेर चार दिनपछि हिजो मात्र फर्किएँ । त्यहाँको जीवन भयावह छ । यातायातमा अवरोध छ । विशेषगरी प्रदेश नम्बर २ का जिल्लामा धेरै समस्या छ । त्यही क्षेत्रमा चाँडै नै चुनाव पनि हुँदै छ । अहिले नवनिर्माणका लागि चार अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराए पनि स्थानीय तहबाट पूर्वाधार बन्ने देखिँदैन । त्यसकारण सरकारले केन्द्रबाटै साथ सहयोग गरेर दीर्घकालीन रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । मैले राखेको प्रस्तावअनुसार विषय अघि बढ्यो भने ८ देखि १० दिनभित्र नै सडकमा सवारी आवागमनलाई सूचारु बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु ।
काँकडभिट्टा–बुटवलका पुल चार लेनका बनाउँछौँ अर्जुनजंग थापा पुल महाशाखा प्रमुख, सडक विभाग बाढीपहिरोले पुललाई भन्दा पनि पुलको पहुँच भएका सडकलाई अधिक क्षति पुर्‍याएको छ । अहिले क्षति पुगेका पुलको मर्मत यही वर्षको हिउँदमा गरिसक्नेछौँ । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत पर्ने सिन्धुपाल्चोकस्थित लार्चाको पुलमा मात्र ४ करोड रुपैयाँको क्षति पुगेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गतका दुधौरा, धन्सार र रातु पुलबाट हुने यातायात सञ्चालन डाइभर्ट गरेर भए पनि सञ्चालन गर्नेछौँ । बुटवलदेखि काँकडभित्तासम्मका पुल ४ लेनको बनाउने तयारीमा छौँ । झन्डै ५० वटा पुलको मर्मत पनि गर्दै छौँ ।
बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त राजमार्ग र पुल
अघिल्लो हप्ता परेको पानी र त्यसबाट आएको बाढी तथा पहिरोबाट देशभरका दर्जनौँ पुल क्षतिग्रस्त बनेका छन् । विभिन्न राजमार्गका सडकखण्डमा पहिरो गएपछि सवारीसाधन चलेका छैनन् । पुल पुनर्निर्माण तथा सडक मर्मतका लागि अर्बौँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ । सडक र पुल भत्किएसँगै विभिन्न जिल्लाको सम्बन्ध असहज बनेको छ। देशभरका विभिन्न पुल र सडकको क्षति तथा वर्तमान स्थिति :
पुलको अवस्था कन्काई खोला पुल कन्काई झापामा रहेको पुल हो । पुलमुनि दायाँ किनाराको पर्खालमा क्षति पुगेको छ । तर, अहिले यस पुलबाट यातायात सञ्चालन भइरहेको छ ।
गछिया खोला पुल पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत गछिया मोरङमा रहेको यस पुलको किनाराको ५ सय मिटर पर्खालमा क्षति पुगेको छ । यस पुलमा पनि यातायात सञ्चालन भइरहेको छ भने किनारामा पर्खाल मर्मत सुरु भएको छ ।
बुढीखोला पुल मोरङमा रहेको यस पुलभन्दा माथिल्लो भागको दायाँ किनारा कटान गरेको छ । त्यस्तै, तल्लो भागको बायाँ किनारा कटान गरेको छ । एकतर्फ गाडी सञ्चालनमा रहेको छ । क्षति भएको स्थानमा ग्याबिन वाल र ग्राभेलको काम सुरु गरिएको छ ।
बिधना खोला पुल कुशाहा सप्तरीमा पर्ने यस पुलको बायाँतर्फको पहुँच स्ल्याबमा क्षति पुगेको छ । अहिले एकतर्फी गाडी सञ्चालनमा रहेको छ । क्षति भएको स्थानमा ग्याबिन वाल र पुर्ने तथा ग्राभेलको काम सुरु गरिएको छ ।
कठौना खोला पुल पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कठौना सप्तरीमा पर्ने यो बायाँ र दायाँ ‘एबुटमेन्ट’ र पर्खालमा क्षति तथा पुलको पहुँचमार्गको केही अंश बगाएको छ । अहिले एकतर्फी गाडी सञ्चालन भइरहेको छ । क्षति भएको स्थानमा ग्याबिन पर्खाल, माटो भर्ने र ग्राभेलको काम सुरु गरिएको छ ।
खडक खोला पुल पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कल्याणपुर सप्तरीमा पर्ने यस पुलको बायाँतर्फको टेवा पर्खालमा क्षति पुगेको छ । अहिले एकतर्फी गाडी सञ्चालनमा रहेको छ । क्षति भएको स्थानमा ग्याबिन पर्खाल, माटो भर्ने र ग्राभेलको काम सुरु गरिएको छ ।
दुधौरा खोला पुल सप्तरीमा रहेको यस पुलको दायाँ पहुँच स्ल्याब र पाइप कल्भर्टमा क्षति पुगेको छ । अहिले एकतर्फी गाडी सञ्चालनमा रहेको छ । क्षति भएको स्थानमा ग्याबिन पर्खाल, माटो भर्ने र ग्राभेलको काम सुरु गरिएको छ ।
मेची राजमार्ग सडकको विभिन्न खण्डमा पहिरो गएको छ । पहिरो पन्छ्याएर यातायात सञ्चालनमा आइसकेको छ । स्थायी संरचना भने बनाउन सुरु गरिएको छैन।
सुरुंगा–दुर्गापुर सडक झापामा रहेको यस सडकको दुई सय ५० मिटर सडकछेउ भत्किएको छ । अहिले एकतर्फी सवारी सञ्चालनमा रहेको छ । क्षति भएको स्थानमा ग्याबिन वाल लगाउने, खाल्डा पुर्ने र ग्राभेल गर्ने काम सुरु भएको छ ।
भन्टाबारी खण्ड सुनसरीमा पर्ने यस खण्डको छुट्टिने स्थान (डाइभर्सन) मा क्षति भएको छ । एकतर्फी गाडी सञ्चालनमा रहेको छ । क्षति भएको स्थानमा ग्याबिन वाल लगाउने, खाल्डा पुर्ने र ग्राभेल गर्ने काम सुरु भएको छ ।
लौकही सडक २ किलोमिटर सडकको दक्षिणी किनारा भत्किएको छ । यस खण्डमा एकतर्फ सवारी सञ्चालन गरिएको छ । क्षति भएको स्थानमा डाइभर्सन बनाउन ग्याबिन वाल लगाउने, खाल्डा पुर्ने र ग्राभेल गर्ने काम गरिँदै छ ।
इटहरी खण्ड सुनसरीमा पर्ने यस सडकखण्डको दक्षिणी कल्भर्ट बक्स र ३० मिटर किनारा बगाएको छ । एकतर्फी सवारी सञ्चालनमा रहेको छ । क्षति भएको स्थानमा ग्याबिन वाल लगाउने, खाल्डा पुर्ने र ग्राभेल गर्ने काम सुरु भएको छ ।
कोसी राजमार्ग यो राजमार्गको धरान–सुनसरी खण्डमा ३० मिटर सडक पूर्ण रूपले बगाएको छ । यातायात निकै असहज बनेको छ ।
उर्लाबारी–रंगेली सडक मोरङमा पर्ने यस सडकखण्डमा दुईवटा कल्भर्ट र सडकछेउ भत्किएको छ । गाडी सञ्चालनमा रहेको र क्षति भएको स्थानमा ग्याबिन वाल लगाउने, खाल्डा पुर्ने र ग्राभेल गर्ने काम सुरु भएको छ ।
मिचैया खण्ड सिरहामा पर्ने यस खण्डमा १५ दशमलव २० मिटर सडक किनारा भत्किएको छ । यातायात आवागमनमा निकै सास्ती परेको छ ।
माडी चितई खोला पुल डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरअन्तर्गत रहेको यो पुल भाँचिएको छ । चितवनको बरुवा बजारमा ३ स्पानको पुल भाँचिएर सडक अवरुद्ध रहेको छ ।
धन्सार पुल बारामा रहेको यो पुल र सडक जोड्ने पहुँच क्षतिग्रस्त छ । अहिले एकतर्फी गाडी सञ्चालनमा रहेको छ । क्षति भएको स्थानमा ग्याबिन पर्खाल लगाउने, प्वाललाई माटोले भर्ने र ग्राभेल लगाउने काम भइरहेको छ ।
दुधौरा पुल बारामै रहेको दुधौरा पुलमा पनि क्षति पुगेको छ । यो पुलको खम्बा क्षतिग्रस्त छ । अहिले सवारी यात्रु ओरालेर मात्र सञ्चालन गर्न दिइएको छ ।
पुल नं ३ यो पुलको पथलैया–हेटौँडाको पहुँच कटान गरिएको छ । एकतर्फी गाडी सञ्चालनमा रहेको यहाँ क्षति भएको स्थानमा ग्याबिन पर्खाल लगाउने, प्वाललाई माटोले भर्ने र ग्राभेल लगाउने काम भइरहेको छ ।
राप्ती पुल मकवानपुरमा रहेको यो पुलको पहुँच कटान गरेको छ । अहिले एकतर्फी गाडी सञ्चालनमा रहेको छ । क्षति भएको स्थानमा ग्याबिन पर्खाल लगाउने, प्वाललाई माटोले भर्ने र ग्राभेल लगाउने काम भइरहेको छ ।
जंगाहा पुल जनकपुर डिभिजनअन्तर्गत रहेको यो पुल डाइभर्सन पुन मर्मत गरेर एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ । मेसिन, क्रेन, ट्रिपरबाट काम भइरहेको छ । गाडी जाममा परिरहेको पुलको पहु“च सडक मर्मत गर्न एक हप्ता लाग्ने जानकारी दिइएको छ ।
रातो खोला पुल यो पुलबाट एकपटकमा एउटा गाडी मात्र पार गर्न दिइएको छ । पुलको एउटा खम्बा क्षतिग्रस्त भएको छ ।
बडहरी पुल यो पुलमा पनि क्षति भएको छ । यद्यपि, गाडी सञ्चालन गर्न दिइएको छ । क्षति भएको ठाउँमा ग्याबिन पर्खाल लगाउने, प्वाललाई माटोले भर्ने र ग्राभेल लगाउने काम भइरहेको छ ।
अरनिको राजमार्ग यो राजमार्गअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेनजिक सय मिटर भासिएको छ । काठे भन्ने ठाउँमा सडक क्षतिग्रस्त छ । अन्य पाँच स्थानमा सडक कटान भए पनि यार्चासम्म सडक सञ्चालनमा रहेको छ । भासिएको ठाउँमा पुल हाल्ने तयारी भइरहेको छ ।
हुलाकी भण्डारा ठोरी सडक हुलाकी भण्डारा सडकखण्डको राप्ती पुलनजिक १९ दशमलव ७५ किमिमा सडक कटान भई यातायात अवरुद्ध रहेको छ ।
पृथ्वी राजमार्ग नागढुंगा–मुग्लिङ सडक पहिरोले अवरोध गरेको थियो । अहिले राजमार्ग सञ्चालनमा रहे पनि पूर्ण रूपमा सहज भने भएको छैन ।
आँपटारी–देवघाट सडक आँपटारी–देवघाट सडकको देवघाट कल्भर्ट बगाएकाले सडक अवरुद्ध रहेको छ ।
चेपाङ मार्ग डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरअन्तर्गत रहेको यो मार्गको भण्डारा ढुंगेमा पहुँच सडक नै बगाएको छ ।
हेटौँडा–लोथर सडक यो सडकखण्डमा पहिरोले अवरोध भए पनि अहिले सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
चन्द्रनिगाहपुर खण्ड अमवा खोलामा पहुँच सडक कटान भएकाले एकतर्फी गाडी सञ्चालनमा रहेको छ । क्षति भएको स्थानमा ग्याबिन वाल, खाल्डो पुर्ने र ग्राभेल लगाउने काम भइरहेको छ ।
चन्द्रनिगाहपुर–गौर सडक चन्द्रनिगाहपुर–गौर सडकमा ४० मिटर कटान भएको छ । यसले सडक अवरुद्ध बनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ । मर्मत कार्य जारी रहेको छ ।
ढल्केबर– जनकपुर सडक यस सडकको लक्ष्मीनियामा पानीले सडकको पुलमा क्षति पु¥याएको छ । साथै पहुँच सडक कटान गरेको छ ।
मुलेजिया–धनुषाधाम सडक मुलेजिया–धनुषाधाम सडक एकतर्फी मात्र सञ्चालनमा रहेको छ ।
धनुषाधाम–धारापानी सडक किसाननगरमा सडक कटान गरेको छ । साथै पाइप बगाएको छ ।
दक्षिणकाली –सिस्नेरी खण्ड यस खण्डमा ठूलो ढुंगा खसेकोले ब्रेकर लगाई पन्छ्याउने काम भएको छ ।
लोहरेखोला पुल सुर्खेत डिभिजनले हेर्ने यो पुलको सतह भत्किएको छ । अहिले एकतर्फी सवारी सञ्चालनमा रहेको र क्षति भएको स्थानमा ग्याबिन पर्खाल लगाउने, प्वाललाई माटोले भर्ने र ग्राभेल लगाउने काम भइरहेको छ ।
गावर पुल डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जअन्तर्गतको यो पुलको पहुँच सडक र स्ल्याब भत्किएको छ । एकतर्फी सवारी सञ्चालनमा रहेको र क्षति भएको स्थानमा ग्याबिन पर्खाल लगाउने, प्वाललाई माटोले भर्ने र ग्राभेल लगाउने काम भइरहेको छ ।
गंदाली पुल डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जअन्तर्गतकै यो पुलको पहुँच सडक र स्ल्याब भत्किएको छ । डुबानले यसमा कुनै काम हुन सकेको छैन ।
शमशेरगन्ज पुल यो पुलको पहुँच सडक र स्ल्याब भत्किएको छ । एकतर्फी सवारी सञ्चालनमा रहेको र क्षति भएको स्थानमा ग्याबिन पर्खाल लगाउने, प्वाललाई माटोले भर्ने र ग्राभेल लगाउने काम भइरहेको छ ।
अघैया खोला पुल यो पुलको पहुँच सडक र स्ल्याब भत्किएको छ । एकतर्फी सवारी सञ्चालनमा रहेको र क्षति भएको स्थानमा ग्याबिन पर्खाल लगाउने, प्वाललाई माटोले भर्ने र ग्राभेल लगाउने काम भइरहेको छ ।
जब्दिघाट पुल पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया जोड्ने यो पुलको आधारस्तम्भ (फाउन्डेसन) नै भत्किएको छ । अहिले यो सडक भएर सवारी सञ्चालन भएका छैनन् ।
पश्चिम, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमाञ्चल सडकको अवस्था
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दाउन्ने खण्ड नवलपरासीस्थित यस सडकमा ४० मिटर सडक बगाएको छ । भित्तातिर सडक खनेर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
सिद्धार्थ राजमार्ग ६० मिटर सडक खसेको र सिद्धबाबामा पहिरो गएको छ । यसका कारण एकतर्फी मात्र सवारी सञ्चालनमा रहेको छ । क्षति भएको स्थानमा ग्याबिन वाल, खाल्डो पुर्ने र ग्राभेल लगाउने काम भइरहेको छ ।
गोरुसिंगे खण्ड पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत अर्घाखाँचीस्थित यस सडकको पाइप कल्भर्ट बगाएको छ । अहिले एकातर्फी मात्र गाडी सञ्चालनमा रहेका छन् । क्षति भएको स्थानमा डाइभर्सन बनाउन ग्याबिन वाल निर्माण गर्ने र ग्राभेल गर्ने काम भइरहेको छ ।
तुलसीपुर–घोरही सडक दाङस्थित यस सडकमा कल्भर्ट बगेको छ । एकतर्फी सवारी सञ्चालनमा रहेको छ । क्षति भएको स्थानमा डाइभर्सन बनाउन ग्याबिन वाल निर्माण गर्ने र ग्राभेल गर्ने काम भइरहेको छ ।
महाकाली राजमार्ग यस राजमार्गमा विभिन्न क्षेत्रमा भारी पहिरो गइरहेको छ । पहिरो पन्छ्याएर यातायात सञ्चालनमा ल्याउन प्रयास भइरहे पनि पहिरोको कारण अवरुद्ध हुने क्रम जारी रहेको सडक विभागले जानकारी दिएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र ०७, २०७४ समय: १०:२१:३४